Izindaba - Izici Zababoshwa Abajwayelekile
Ishubhu Esishisayo Esibandayo
Ukusika i-Fuse Cutout
1. Umthamo wamanje we-zinc oxide arrester mkhulu
Lokhu kuboniswa kakhulu yikhono lababamba umbani ukumunca ukweqiwa okuhlukahlukene kombani, amandla wevolumu yamandla okuhamba kwesikhashana, kanye nokusebenza kwamandla okugeleza. Umthamo wokugeleza kwamanje we-zinc oxide arrester okhiqizwe yiChuantai uhlangabezana ngokugcwele noma weqe nezidingo zamazinga kazwelonke. Izinkomba ezinjengezinga lokukhishwa kolayini, amandla wokumunca amandla, i-4/10 nanosecond ukubekezelelana okuphezulu kwamanje, kanye namandla wamanje we-2ms square wave afinyelele ezingeni elihamba phambili lasekhaya.
2. Izici zokuvikela ezinhle kakhulu zokubanjwa kwe-zinc oxide
I-Zinc oxide arrester ingumkhiqizo kagesi osetshenziselwa ukuvikela imishini kagesi ehlukahlukene kusistimu yamandla ekulimaleni ngokweqile, futhi inokusebenza okuhle kokuvikela. Ngoba isici se-volt-ampere se-non-linear sepuleti ye-zinc oxide valve sihle kakhulu, ukuze kungamakhulu ambalwa kuphela wamanje we-microampere yamanje ongadlula ngaphansi kwamandla kagesi ajwayelekile, kulula ukuklama isakhiwo esingenasikhala, ukuze kube nokuvikelwa okuhle ukusebenza, isisindo esincane, nosayizi omncane. isici. Lapho i-voltage engaphezulu ihlasela, okugeleza manje ku-valve plate kukhula ngokushesha, futhi ngasikhathi sinye ubukhulu be-over-voltage bunqunyelwe, namandla we-over-voltage ayadedelwa. Ngemuva kwalokho, ipuleti le-zinc oxide valve libuyela esimweni esiphakeme sokumelana, ukuze uhlelo lwamandla lusebenze ngokujwayelekile.
3. Ukusebenza kokubekwa uphawu kwe-zinc oxide arrester kuhle
Isici sokubopha sisebenzisa ijakhethi ehlanganisiwe esezingeni eliphakeme enokusebenza okuhle kokuguga nokuqina komoya, nezinyathelo ezifana nokulawula ukucindezelwa kwendandatho yokufaka uphawu nokungeza i-sealant. Ijacket ye-ceramic isetshenziswa njengezinto zokufaka uphawu ukuqinisekisa ukubekwa uphawu okuthembekile nokusebenza okuzinzile kwalowo obambayo.
4. Izici zomshini we-zinc oxide arresters
Ngokuyinhloko cabanga ngezici ezintathu ezilandelayo:
Force Amandla okuzamazama komhlaba;
PressureUkucindezela komoya okuphezulu kusebenza kulowo oboshiwe
⑶ Isiphetho esiphezulu somboshwa sithwala ubukhulu bezingcingo obuvumelekile.
5. Ukusebenza kahle kokuqeda ukungcoliswa kwe-zinc oxide arrester
I-zincless zinc oxide arrester inokuphikiswa okukhulu kokungcola.
Izinga lamanje lebanga le-creepage elicaciswe ngezinga likazwelonke yile:
⑴Isigaba II sokungcoliswa okuphakathi nendawo: ibanga le-creepage 20mm / kv
Level III ileveli esindayo yokungcola: ibanga le-creepage 25mm / kv
⑶ IBanga IV, indawo esindayo kakhulu yokungcola: ibanga le-creepage 31mm / kv
6. ukuthembeka okuphezulu kokusebenza kwe-zinc oxide arresters
Ukuthembeka kokusebenza kwesikhathi eside kuncike kwikhwalithi yomkhiqizo nokuthi ngabe ukukhethwa komkhiqizo kunengqondo yini. Ikhwalithi yemikhiqizo yayo ithinteka ikakhulu kulezi zici ezintathu ezilandelayo:
A. Ukuhleleka kwesakhiwo sonke somboshwa;
Izici ze-B Volt-ampere nezimpawu zokumelana nokuguga kwama-valve oxide e-zinc
C Ukusebenza kokufaka uphawu kwesiboshwa.
7. Ukubekezelelana kwemvamisa yamandla
Ngenxa yezizathu ezahlukahlukene ezinjengokugxila esigabeni esisodwa, ukusebenza ngamandla komugqa omude nokulahla umthwalo ohlelweni lwamandla, kuzodala ukukhuphuka kwamandla kagesi wamandla noma kukhiqize ukuqhuma okungaphezulu kwesikhashana nge-amplitude ephezulu. Oboshiwe angamelana nobuningi bamandla athile esikhathini esithile. Amandla wokwanda kwamandla.
Isikhathi Iposi: Sep-29-2020
Ikheli: Cha. 217, Wei12 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing City, Zhejiang Province, China
Imithetho Esebenzayo Yokudlulisa Amandla i ...
I-6KV High Voltage switchgear
Uyini umsebenzi we-terminal cable?
I-Sensor Technology Yenza Amadolobha Ahlakaniphe
Amakhono amahlanu wokuqamba kanye ne-indicato yezobuchwepheshe ...